Russia maliteghachi njem ụgbọelu na mba anọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » Russia maliteghachi njem ụgbọelu na mba anọ
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Akụkọ na -agbasa Russia • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa Vietnam
Russia weghachitere ikuku ikuku na Qatar, India, Vietnam na Finland
Ndị ọrụ Russia mara ọkwa na na Jenụwarị 27, 2021, Russia ga-amaliteghachi ụgbọ elu ya na mba anọ, bụ ndị kwụsịburu na mbụ n'ihi Covid-19 oria ojoo.
Bido n’ụbọchị Wenesde na-abịa abịa, ụmụ amaala Rọshịa ga-enwe ike ifega Qatar, India, Vietnam na Finland. Lymụ amaala nke mba ndị a, ga - enwe ike ifega Russia. Otu ihe a metụtara ndị nwere ikike obibi na mba ndị a.
Mkpebi a ịmaliteghachi njikọ ikuku na mba anọ ahụ bụ isi ụlọ ọrụ gọọmentị Russia maka coronavirus, na Mịnịsta Ala nke Russia Federation bịanyere aka na iwu kwekọrọ na ya.
Dabere na nkwupụta ndị ọrụ ahụ, ụgbọ elu na Qatar ga-apụ ugboro atọ n'izu, India, Vietnam na Finland - ugboro abụọ n'izu.
E kwupụtakwara na Saịprọs ga-emepe ókè maka ndị njem si mba ọzọ site na Machị 1.